नाम अनुशारकाे राशिफल: साताभरीकाे आफ्ने भाग्यफल हेर्नुहाेस् कुन नामकाे के राशि हुन्छ जान्नुहाेस् - jillakhabar.com Nepal's Digital News site
Home दर्शन/संस्कृति नाम अनुशारकाे राशिफल: साताभरीकाे आफ्ने भाग्यफल हेर्नुहाेस् कुन नामकाे के राशि हुन्छ जान्नुहाेस्
नाम अनुशारकाे राशिफल: साताभरीकाे आफ्ने भाग्यफल हेर्नुहाेस् कुन नामकाे के राशि हुन्छ जान्नुहाेस्
Posted By: जिल्लाखबर संवाददाताon: ८ चैत्र २०७६, शनिबार ०५:५९
आज २०७६ साल चैत ८ गते शनिवार, तदअनुसार मार्च २१, २०२०
अरूलाइ दु:ख दिएर खुसि खाेज्ने भन्दा अरूकाे खुसिनै आफ्नाे खुसि सम्झने मान्छे महान हुन्छ ।
यो साता धर्म,कर्म तथा समाज सेवामा मन लाग्नेछ । टाढा रहेका साथीभाइहरूसँग मनोरञ्जक भेटघाट हुनेछ । आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउनेछ । नजिकको व्यक्तिको सहयोगबाट कार्य पुरा हुनेछ । शुभ समाचारपनि सुन्न पाइएला । यो साताका लागि शुभअङ्क १,५ र शुभरङ्ग पहेंलो वा गुलावी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व भैरवजीको दर्शन गर्नाले सफलता हात पर्नेछ ।
यो साता शुभ समाचार सुन्न पाइएला । छोटो दुरीको लाभदायक यात्रा हुनेछ । उन्नति एवं प्रगतिको वातावरण बन्नेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने वेला छ । भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ । साताको अन्त्यमा दुष्ट व्यक्तिको संगतले आत्मघाती काम गर्न पुगिएला । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,८ र शुभरङ्ग खौरो वा गुलाबी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व महालक्ष्म्मीजीको दर्शनगरी यात्रा गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो साता नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । प्रेममा मनमुटाव बढ्न सक्छ । मनमा देखिने अस्थिरता अधैर्यताका कारण निर्णायक क्षमतामा कमी आउनेछ । मध्य साताबाट भने लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको काम पूरा हुनेछ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,७ र शुभरङ्ग गुलाबी वा सुन्तलारङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व भैरवजीको दर्शन गर्नाले अधिक सफलता हात पर्नेछ ।
आज आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । सामाजिक कार्यमा रुची बढ्नेछ । नयाँ वस्त्र, अलंकारको प्राप्ति होला । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । शुभकार्यको चर्चापनि चल्नेछ । मध्य सातामा मन खिन्न हुने स्थिति आउनेछ र बढी धन खर्च होला । यो साताका लागि शुभअङ्क ५,८ र शुभरङ्ग सेतो वा हरियो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व बगलामुखीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्नाले अधिक सफलता हात पर्नेछ ।
यो साता आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । साथी भाईको भेटघाटले मन प्रफुल्ल रहला । एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । कूटनीतिक नियोगको काम अघी बढ्नेछ । प्रेम प्रस्तावसमेत प्राप्त हुनसक्छ । विपरीत वर्गप्रति आकर्षण बढ्नेछ । साथै अकस्मात धन सम्पत्ति हात पर्नेछ र यो साताका लागि शुभअङ्क १,७ र शुभरङ्ग रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व दुर्गाजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
कन्या (टाे, पा, पु, पी, ष, ण, ठ, पे,पाे)
यो साता मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउनेछ । नजिकको मित्रसँग भेटघाट हुनेछ । नयाँ वस्त्र तथा अलंकार प्राप्ति हुनेछ । परिश्रमअनुसार उपलब्धि पनि राम्रै पाइएला । साताको मध्यमा मन खिन्न हुने स्थिति आउनेछ । आर्थिक कारोवारमा मन्दी आउनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,९ र शुभरङ्ग पहेँलो वा निलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रा गर्नु अघि विष्णु भगवानको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । झञ्झटिलो काममा संलग्न हुनुपर्ने समय छ । गरेका काममा पनि ढिलासुस्ती हुने देखिन्छ । प्रेमप्रसङ्गमा समेत नरमाइलोपन आउने छ । साताको उत्तरार्ध बाट रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । साथी भाईको भेटघाटले मन प्रफुल्ल रहला । यो साताका लागि शुभअङ्क ५,८ र शुभरङ्ग रातो वा घ्यूरङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विष्णुजीको ध्यान गरी आरम्भ गर्दा अधिक लाभ हुनेछ ।
यो साता रमाइलो यात्राको योग रहेको छ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने वेला छ । नसोचेको ठाउँबाट धनागम हुनेछ । विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग पाईनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । जुक्तिर बुद्धिको प्रयोगले समस्या सुल्झाउन सकिनेछ । बोलीको प्रभाबपनि बढ्दै जानेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,६ र शुभरङ्ग सेतो वा हरियो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व हनुमानजीको स्मरण गर्नाले अधिक सफलता हात पर्नेछ ।
यो सातामा नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुने भएको छ । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । पारिवारिक भेटघाट हुनुका साथै इष्टमित्रहरूसंग पनि मेलमिलाप हुनेछ । विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग मिल्ला । प्रेममा सफलतापनि पाईनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,५ र शुभरङ्ग रातो वा पहेँलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको स्मरण गर्नाले सफलता हात पर्नेछ ।
भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ । रोकिएको काम दोहोर्याएर गर्दा फाइदा हुनेछ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउन सकिनेछ । सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन् । विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग पाईनेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । साहित्यिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,५ र शुभरङ्ग रातो वा कालो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व दुर्गाजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले सफलता मिल्नेछ ।
विपक्षीको छलकपट तथा जालझेलबाट सावधान रहनुपर्नेछ । आफूलाई कमजोर भएको अनुभूतिपनि हुनेछ । ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ । साताको उत्तरार्ध बाट नयाँ वस्त्र, अलंकारको प्राप्ति हुनेछ । साझेदारीको कर्यबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त मिल्नेछ । महिला वर्गबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,८ र शुभरङ्ग सेतो वा खैरो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको स्मरण गर्नाले सफलता हात पर्नेछ ।
यो साता नसोचेको ठाउँबाट धनागम हुनेछ । नयाँ व्यक्ति संग भेटघाट हुने छ । मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउनेछ । मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउनेछ । साताको मध्यमा मन खिन्न हुने स्थिति आउनेछ । आर्थिक कारोवारमा मन्दी आउनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,९ र शुभरङ्ग पहेँलो वा निलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि विष्णु भगवानको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
खाना पकाउने ग्यास र उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद
कोरोनाको जोखिममा युवा पनि रहेकाले सचेत हुनुहाेस्: विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ)
दुर्गमका विद्यार्थीकाे पीडा, मुखको बाफले हात सेक्दै परीक्षा दिँदै !
१० बर्ष अघि लिएको लाइसेन्स दोस्रो पटक नविकरण गर्न जाँदा ट्रायल फेल ! कर्मचारीकाे लापरवाही, सेवाग्राहीलाइ सास्ती
२३ कार्तिक २०७६, शनिबार ०७:२५
पर्साकाे ठाेरीमा उखुबारीमा आगलागी हुदा लाखौ मूल्य बराबरको उखु जलेर नष्ट
१८ चैत्र २०७४, आईतवार २०:३४
खुशीको खबर : अब नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राखिदै, बैशाख ४ गते प्रक्षेपण गर्ने _सेयर गराै
२० फाल्गुन २०७५, सोमबार २१:०१